आँसुले भात मुछेर खाइरहेका सञ्‍जीव आफैँसँग प्रश्न गर्छन्, ‘के भयो जीवनमा ? (भिडियो) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/आँसुले भात मुछेर खाइरहेका सञ्‍जीव आफैँसँग प्रश्न गर्छन्, ‘के भयो जीवनमा ? (भिडियो)
सञ्‍जीव अहिले खुलामञ्‍चमा छन् । कोभिड-१९ महामा`रीअघि सयौँ मानिसलाई खाना पकाएर खुवाउने उनी अहिले आफैँ मागेर पेट भर्दै छन् । चैतमा लकडाउन सुरु हुनुअघि उनी बौद्धको थकाली रेस्टुराँमा कुक थिए । लकडाउनसँगै उनको काम खोसियो । बेरोजगार बनेका सञ्‍जीवले चैतमा पाएको अलिकति तलबले कोठाभाडा तिरे । आम्दानी रोकिएपछि कोठाभाडा तिर्न सकेनन् । लकडाउनकै बेला उनी घर गए । १ असारमा लकडाउन खुलेपछि काम पाइने आसले फेरि काठमाडौं फर्किए । तर, काम नपाएपछि सञ्‍जीव पेट पाल्न उल्टै सडकमा आउनुपर्‍यो ।
जेठ ३ गते शनिबार देखि यस्ता क`डा नियमहरु लागु हुने, कसैले नसोचेको नियम आयो हेर्नुहोस भिडियो सहित !